Ogaden News Agency (ONA) – Qoomiyada Agaw oo Kubiirtay Kacdoonka Lagaga Soo Horjeedo TPLF.
Qoomiyada Agaw oo Kubiirtay Kacdoonka Lagaga Soo Horjeedo TPLF.
Wararka haatan naga soo gaadhaya Gobolka xabashida ayaa waxay sheegayaan in mudaharaadyo xoog badan ay ka socdaan Gobolka Axmaarada. Mudaharaadadan ayaa waxaa lagaga soo horjeedaa Gumaysiga Itoobiya.
Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ayaa waxay isticmaalayaan awood si ay u joojiyaan mudaharaadada, wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in lagu laayay dad shacab ah waxaana ladilay 4 qof oo rayad ah halka 18 kalana la dhaawacay.
Sidoo kale mudaharaadka ayaa gaadhay Qawmiyada dadka loo yaqaano Agawi ee ku dhex nool Axmaarada si khasab ahna maamulkaas loo hoos geeyay caasimada dadka Agaw Ginjibat ayaa rabshado xoog badan ka jiraan dadkan ayaa ah dad caan ku ah xeladaha dagaalka, waxaana gumaysiga kaga furmay dabkale goobtaas.
Waxaa loo daabulay ciidamo badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo larabo in lagu xakameeyo mudaharaadada socda. Mudaharaadyadan ayaa waxaa lagu gubay sawirada Kaligii Taliye Meles Zenawi iyo calanka Faderal ku sheega Itoobiya.
Guud ahaan xaalada Gobolka Axmaarada ayaa kasii daraysa marba marka ka danbaysa waxaana sii badan haya xasuuqa dilka iyo xadhiga lagu hayo dad shacabka ah xaalada Itoobiya ayaa u muuqata mid gabalkeedu sii dhacayo oo aan la saadaalin karin waxa mustaqbalkeeda soo waji kara.
Wararkan wixii kasoo kordha kala soco ONA.